Taratasy fandroahana noho ny aizim-fitondran-tena na lehibe, ny tsy fitandremana - Ny Haneho Ny Orinasa - Ny mpahay lalàna ao Frantsa online!
Taratasy fandroahana noho ny aizim-fitondran-tena na lehibe, ny tsy fitandremana - Ny Haneho Ny Orinasa
Noho izany, ny fe-potoana tsy niasa
Isika ve ny manaraka ny resadresaka talohan'ny fandroahana. Ianao no mandray anjara amin'ny fitondran-tena izay fototry ny tsiny(basse mavesatra). Eny tokoa (mazava tsara ny toetry ny fitondran-tena sy ny toe-javatra). Ireo zava-misy efa nataony ho zava-dehibe ao amin'ny fanontaniana ny malambolambo mandeha ny orinasa.
Izany no antony, ao amin'ny hazavana ny zava-dehibe sy na dia eo aza ny fanazavana nandritra ilay dinika savaranonando, dia hanenina rehefa miroso amin ny famaranana ny asa noho ny fitondran-tena.
(basse mavesatra). Ireo izany antony izany ihany koa, ny fikojakojana ao amin'ny enterprise manaporofo ho azo, ao anatin'izany nandritra ny fe-potoana filazana. Ny fandroahana mihatra amin'ny voalohany fanolorana ity taratasy ity, tsy misy severance mandoa na ny filazana. Ny zavatra anisan'ny lehibe tsirambina, dia tsy ho mitondra ny lohateny hoe ny fialan-tsasatra mandoa. Isika hampatsiahy anao fa ianao ihany koa ny vita ny momba ny layoff toy ny conservatory. (manondro ny datin'ny ny fiandohana sy fiafaran'ny layoff) dia tsy mandray karama. Na dia teo aza izany, dia mampahafantatra anao izay efa azony. ora (tsy ho vita) ny fanajana ny kaonty manokana ny formation sy mitandrina ny tombom-barotra. Rehetra dia anao sisa noho mba ho nalefa tany amin'ny paositra, miaraka amin'ny asa fanamarinana, final tantara, ary taratasy fanamarinana ho an'ny Pôle asa, (ary raha azo atao) ary koa ny fanjakana famintinana ny vola sy ny soatoavina voavonjy ao ny fitaovana fandraisana anjara, ny tombom-barotra-ny fizarana sy ny mpiasa tahiry tetika.
Ny kaonty manokana ny fiofanana dia niditra tao an-kery ao amin'ny janoary.
Manolo ny olona tsara ny fiofanana, saingy ny ora DIF efa azony dia nafindra tany. Ny maha samy hafa ny DIF ny zo voalaza ao ny CPF mitoetra nomena na inona na inona ny hamafin'ny ny tsy isaina ny mpiasa, anisan'izany ny lehibe ny tsy fitandremana.
Fanofana trano ao parisy
சட்ட தொழிலை ஆக எப்படி: ஒரு வழக்கறிஞர் - மாணவர்